बुधबार १२ अंक घट्यो नेप्से - Naya Patrika
बुधबार १२ अंक घट्यो नेप्से
काठमाडौं, २५ माघ | माघ २५, २०७४
बुधबार सेयर बजार १२ दशमलव शून्य १ अंकले घटेको छ । अघिल्लो दिनभन्दा शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार कारोबार सुरु भएदेखि निरन्तर घटेर १ हजार ३ सय ८२ दशमलव शून्य २ बिन्दुमा पुगेको छ । ७ लाख ४२ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा यस दिन २६ करोड ५५ लाख ६६ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । कुल बजार पुँजीकरण रू. १६ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर २ सय ९१ दशमलव ९६ अंक पुगेको छ । व्यापार र वित्त कम्पनी समूहबाहेक बाँकी समूहको सेयर मूल्य घटेको छ ।
व्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव ५३ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, बिमा समूहको परिसूचक १ दशमलव १७ प्रतिशत र ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत घटेको छ । साथै, होटेल समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत, बैंकिङको शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत, लघुवित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत र जलविद्युत्को शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घटेको हो ।
बुधबार नेपाल बैंकको सबैभन्दा ५ करोड १८ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल बैंकको एफपिओ जारी हुने खबरले लगानीकर्ता यस बैंकप्रति आकर्षित भएका हुन् । बैंकको सेयर मूल्य भने रू. १४ ले घटेर रू. ३ सय ४६ पुगेको छ । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्सको सेयर मूल्य ६ दशमलव १६ प्रतिशत बढेर रू. १ सय ५५ पुगेको छ । कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भने ४ दशमलव १८ प्रतिशत घटेर १५०० पुगेको छ । यस दिन ३१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, १ सय ७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने १४ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ५२ कम्पनीको ३ हजार १ सय ९६ पटक कारोबार भएको छ । यसबाट ७ लाख ४२ हजार १० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
तिनाउको नाफा घट्यो
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा तिनाउ विकास बैंक लिमिटेडको नाफा घटेको छ । बैंकले गत आवको तुलनामा कर्मचारी खर्च २८ प्रतिशत, ब्याज खर्च ८४ प्रतिशत र अन्य सञ्चालन खर्च ४२ प्रतिशतले बढेपछि नाफा घटेको छ । गत आवको तुलनामा बैंकको नाफा २२ प्रतिशत घटेर रू. ३ करोड ९९ लाख पुगेको छ भने खुद ब्याज आम्दानी १८ प्रतिशत घटेर रू. ८ करोड पुगेको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा ३४ प्रतिशत घटेर रू. ५ करोड २० लाख पुगेको छ । बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ९५ लाख ३ हजार खराब कर्जा संकलन गरेको छ ।
बैंकले दोस्रो त्रैमासमा रू. ४ अर्ब ३३ करोड निक्षेप संकलन गरी रू. ३ अर्ब ५२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । जगेडा कोषको रकम २५ प्रतिशत बढेर रू. ११ करोड १५ लाख पुगेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
वोमीको नाफा ८४ प्रतिशत बढ्यो
चालू आवको दास्रो त्रैमासमा वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको खुद नाफा ८४ प्रतिशत बढेर रू. १ करोड ८४ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रू. १ करोड ३० हजार थियो । खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा बढेकाले खुद नाफा बढेको हो । सो अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० प्रतिशत बढेर रू. ६ करोड ४८ लाख पुगेको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि पुँजी बढेको हो । साथै, कम्पनीले बोनस सेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्ता पुँजी १० बराबर ३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुस ३० गते निवेदन दिएको छ ।
कम्पनीले सम्भावित जोखिमबापतको व्यवस्थामा रू.२९ लाख ८६ हजार छुट्याएको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष रू. ४ करोड ४४ लाख रहेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ५९ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी रू. ५७ दशमलव शून्य ७ र मूल्य आम्दानी अनुपात २६ दशमलव २८ गुणा रहेको छ ।
कैलाशको नाफा २६ करोड
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले रू. २६ करोड ६० लाख नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आवको तुलनामा शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र बढी हो । सो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा घटेको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा बैंकको चुक्ता पुँजी गत आवको तुलनामा २७ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ भने जगेडा कोषको रकम ९ प्रतिशत बढेर रू. ८० करोड १६ लाख पुगेको छ । बैंकले दोस्रो त्रैमासमा रू. १९ अर्ब ११ करोड निक्षेप संकलन गरी रू. १७ अर्ब ५१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रो त्रैमासमा बैंकले रू. ४ करोड ६४ लाख खराब कर्जा संकलन गरेपछि नाफामा सामान्य सुधार आएको हो ।
कालिकाको नाफा घट्यो
कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नाफा गत आवको तुलनामा ५३ प्रतिशत घटेर रू. ६५ लाख ४१ हजार पुगेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कर्मचारी खर्च गत आवको तुलनामा ७२ प्रतिशत बढेपछि नाफा घट्न पुगेको हो । बैंकको सञ्चालन नाफा ६१ प्रतिशत घटेर रू. ७० लाख पुगेको छ भने खुद ब्याज आम्दानी २२ प्रतिशत बढेर रू. ४ करोड १३ लाख पुगेको छ । बैंकले दोस्रो त्रैमासमा रू. ४२ करोड ४६ लाख निक्षेप संकलन गरी रू. १ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी गत आवको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढेर रू. ८ करोड २५ लाख पुगेको छ ।